Isbarbar-dhig lagu sameeyay Muuse Biixi & Samuel K. Doe (Qormo guud ahaan Soomaalida anfacaysa) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Isbarbar-dhig lagu sameeyay Muuse Biixi & Samuel K. Doe (Qormo guud ahaan...
Isbarbar-dhig lagu sameeyay Muuse Biixi & Samuel K. Doe (Qormo guud ahaan Soomaalida anfacaysa)
(Hadalsame) 05 Maajo 2019 – Madaxweynihii hore ee LIBERIA Samuel K. Doe, marku talada dalkiisa qabsaday dadkiisu ma ay soo dhowayn, waxaanay ku xanteen in u askari xun oo bilaa tacliin ah yahay.
Samuel Doe doqon muu ahayn xantiisa moog ee dugsi ayaa isaga iyo rag dawladiisa ka tirsani galeen oo ay ka bilaabeen fasalka shanaad ee dugsiga hoose. Sidii buu ku dhamaystay waxbarashadii aas-aasiga ahayd. Weli reer LIBERIA xantii may joojin oo madaxweynaha waxay ku quudhsadaan inu jaahil yahay.
Ninkii Samuel Doe ahaa wuxu bilaabay jaamacad, waxaanu bartay culuumta dhaqaalaha iyo siyaasadda. Haddana reer Liberia halkii uun baa ay ka sii miiseen oo waa ummi aan waxba aqoon baa ay la soo taagnaayeen.
Ninkii Samuel markii dacaayadii iyo quudhsigii dadkiisu ka dayn waayeen ee shahaadooyinkiisii dadka laga madoobeeyay ayuu jaamacaddii dalka u weynayd u bixiyay Samuel Doe University.
Ninkii odayga ahaa wuxu nacayb u qaaday dadkiisi oo uu karahsaday. Aakhirkiina Liberia dalluun dheer buu ka riday, oo wixii uu ba’ iyo bayhoof baday dadkiisa waa tii la oggaa.
Kolka qofka aadanaha ah waxba loo qiri waayo ee la xaqiro dadnimada wuu ka tagaa oo dugaag ayuu noqdaa oo waa uu is waayaa, weydiimahuna madaxiisa waa ay ku bataan. Samuel Doe isaga oo madaxweyne ah ayaa la quudhsaday oo cidi dedaalkiisa aqbali weyday, dabadeedna ciilkii ayuu kula dhacay dadkiisii. Dadkiisi waxay ku mashquuleen askarinimadiisii oo ay ku quudhsadeen iyaga oo aqoon la’aan ku liidaayay, markii u tooda yeelay ee uu wax bartayna ma ay hambalyayn ee waa sii bah-dileen.
Dhaqanka dadkaasi saaka Soomaaliland buu ka jiraa, oo Muuse Biixi intii aynu si miyir qabta sanadkii iyo badhkii u jooggay wixii qabsoomay qiimayn lahayn, ee aynu hanaankiisa maamul iyo hoggaamintiisa ku amaani lahayn ama ku dhaliili lahayn, ayaa aynu u xuub siibanay faalaynta iyo liidida qofnimadiisa iyo shakhsiyadiisa. Waxay odhanayaan waa jaahil xun oo askari ah.
Goormay askarinimadu ceeb noqotay? Waxay odhanayaan aqoon ma le? Waxay odhanayaan waa reer hebel? Waxa ay odhanayaan… waxa ay odhanayaan kun waxyaalood oo shakhsiyadiisa iyo qofka uu yahay liddi ku ah, halkii ay ahayd In aynu wuxu qaribo ku canaanano, wuxu hagaajiyona ku hambalyayno.
Reer Soomaalilandow kolka hore qofka qofnimadiisa soo qiimeeya, oo soo kala hufa hebelada hoggaamintiina u taagan, laakiin marku qofku yimaaddo madaxtooyada waxqabadkiisa, kartidiisa, hoggaamintiisa iyo sidu amaanadii aad u dhiibateen ka yeelay qiimeeya oo ku amaana haddii uu ka soo baxay, haddii uu qaribayna ku maaga, laakiin aynu ka waantownaa in aynu qadafno, qiimo tirno oo quudhsano qofka hoggaankeenna haya qofnimadiisa.
Previous articleDAAWO: Gabar sanad jir ah & hooyadeed oo uur leh oo ka mid ah dad ku dhintay duqaynta Israel ee Gaza + Sawirro
Next article”Waxaan rajaynayaa inay ku jiraan mid ama laba garan doona saamaynta go’aankooda!” – Talo loo jeediyay madaxda Garoowe ku shirsan